Friday, 21 Oct, 2016 4:06 PM
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको क्षमता बढाउन तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घटाउन पूँजी बृद्धिको निर्देशन दिएपछि यतिबेला बैकहरु पूँजी वृद्धि गर्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । हकप्रद र बोनस दिएर पूँजी पुर्याउन सक्ने वित्तिय संस्थाहरू बोनस र राइट सेयर घोषणा गरिरहेका छन् भने कतिपयले पूँजी पुर्याउन सँस्था मर्जर र एक्वायर गरिरहेका छन् । २०७४ असार मसान्तसम्ममा विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्नेछ । चुक्ता पूँजी पुर्याउन दिएको निर्देशनको एक बर्ष पुरा भइसकेको छ । यस्तै रेमिट्यान्स्मा गिरावट, विकास निर्माणको काम अपेक्षित् नहुँदा बजारमा तरलता केही कम भएको अवस्था छ । जसका कारण नै वित्तियसंस्थाहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन् ।
भmण्डै २९ बर्ष अघि नेपाल बैंक लिमिटेडबाट बैंकिङ यात्रा शुरु गरेका कृष्णराज लामिछाने अहिले कैलाश विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनी विकास बैंकहरुको छाता संगठन विकास बैंक बैंकर्स सँघको अध्यक्ष समेत हुन् । पछिल्ला दिनहरुमा विकास बैंकको अवस्था , ब्याजदर परिवर्तन, तरलताको अवस्था, हरेक नेपालीमा बैंकङ पहुच पुर्याउन विकास बैंकले खेलेको भुमिका, बैंकको पुूँजी बृद्धि योजना लगायतका विषयमा लामिछानेसँग न्यूजसेवाका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेकोे कुराकानीको अंश :
यतिबेला बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पुँजी बृद्धिको चटारो छ, अब एक वर्ष भन्दा पनि कम समय भएको अवस्थामा विकास बैंकहरुको अवस्था कस्तो छ ?
पूँजी बृद्धिकै लागि भनेर पछिल्ला दिनहरुमा धेरै बैंकहरु विशेष गरी विकास बैंकहरु मर्जरमा गएका छन् । केही समय अघि ८६ वटाको संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु अहिले मर्जरकै कारण ५०/६० वटामा झरेका छन् । अहिले पनि धेरै विकास बैंकहरू मर्जर तथा एक्वायरकै क्रममा रहेकाले यो संख्यामा गिरावट आएर ३० वटा जति विकास बैंक हुने देखिन्छ । तर तीनका शाखाहरु जहाँ जहाँ थिए त्यहीँ त्यहीँ रहन्छन र डुप्लिकेसन भएको ठाउँमा रिलोकेसन मात्र हुन्छ ।
धमाधम मर्जर हुदा तपाईले ३० वटा विकास बैक मात्र रहन्छ भन्नु भयो, राष्ट्रबैंकले सिधै मर्जरमा जान नभनेपनि उसको लक्ष्य भनेको बैंकहरुको संख्या घटाउनुनै हो , शाखा यथावत रहेपनि बैंकहरूकै संख्या कम हुँदा विकास बैंकको भविष्य चाहि कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पूँजी बढाउन भनेपछि मर्जरबाहेक प्राय बैंकको अरु विकल्प पनि छैन । तर विकास बैंकको भविष्यनै धरापमा पर्छ भन्ने चाहिँ होइन । बाणिज्य बैंककै हाराहारीमा विकास बैंक पुग्छ । बाणिज्य बैंकहरु सबै सदरमुकाम केन्द्रित हुदा विकास बैकले आफ्नो भुमिका ग्रामिणस्तरमा पुर्याएको छ । यसकारण पनि सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले गाउँ क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन पनि विकास बैंकको आवश्यक पर्छ । तर पहिला एकजिल्ले ÷तिन जिल्लेका लागि लक्षित गरेर खोलिएका विकास बैंकहरु प्जी पुर्याउनकै लागि मर्जरमा जाने भएपछि उनीहरुको संख्या घट्छ र पूँजीका हिसाबले बलिया पनि बन्छन् । जहाँ जहाँ जति शाखाहरु पुगेका छन् ती बन्द गर्न पनि पाइदैन र बन्द पनि हुदैन । संख्या घटेपनि नेटवर्क घट्दैन, सँस्था बलिया हुन्छन् । त्यसकारण भविष्य राम्रो छ ।
तपाईले गाउँ गाउँमा बैंकिङ पहुँच पुग्न विकास बैंकको भुमिका हुन्छ भनिरहदा यति धेरै विकास बैंक भएपनि अझै कति जनसंख्या त बैंकिङ पहुँचबाटै टाढा छन् । यस्तो अवस्थामा विकास बैंकको भुमिकालाई कसरी हेर्ने ?
हेर्नुस कुनै पनि कुरा शुन्यतामा चल्दैन, त्यसका लागि पूर्वाधारको आवश्यक पर्छ । पहिले त ती गाउँहरुमा जनसंख्याको आकार कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ भने अर्को पूर्वाधार विकासको कुरा हो । नगद बोकेर ल्याउने अवस्था कस्तो छ , सुरक्षाको अवस्था ,बिद्युतको उपलब्धता जस्ता कुराले पनि महत्व राख्छ । निश्चित मापदण्ड पुगेको ठाउँमा यति धेरै प्रतिस्पर्धा छ बैंकहरु आफै पुगिहाल्छन् । जसरी ओरालोमा पानी बग्छ त्यस्तै जहाँ आवाश्यकता र अवसर देख्छन् त्यहा बैंकहरु भागिहाल्छन् ।
हरेक नेपालीमा बैंकिङ सुविधा नपुग्नुमा बैंक होइन सरकारी उदासीनताको कारणले भएको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
सबै नेपालीको पहुँचमा बैकिङ सेवा पुग्न आवश्यक पूर्वाधार पुग्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले कदम चाल्नै पर्छ । कतिपय अवस्थामा पूर्वाधार पुग्दा पुग्दै नोक्सानी हुन सक्छ बस्ती थोरै छ ,आर्थिक कारोबार कम हुन्छ भने, यस्तो अवस्थामा सरकारले नोक्सानीको केही प्रतिशत बेहोर्नुपर्छ । यदि सेवा पु्र्याउने हो भने सरकारले पनि केही लगानी गर्नुपर्याे नी ।
बैंक भनेको नगद कारोबार हुने ठाउँ हो जसलाई सुरक्षाको आवाश्यकता पर्छ । त्यो क्षेत्रमा केही उद्यमशीलता भएको व्यक्ति पनि चाहियो । विशेषगरी ग्रामीण जनतामा वित्तिय साक्षरता छैन् । जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कति धेरै जनचेतनामुलक विज्ञापनमा खर्च गरिरहेको छ तर बैकिंङ क्षेत्रमा अर्थमन्त्रायको त्यो जागरुकता खोइ ? एउटा पनि विज्ञापन निकालेर भनेको छैन की तिमीहरु बैंकमा खाता खोल । बंैकहरुले विज्ञापन गर्दा आफ्नो स्वार्थका लागि गर्यो भन्छन् तर त्यही कुरालाई अर्थमन्त्रालयद्धारा भन्यो भने जनहितका लागि भन्यो भनेर सर्वसाधारणले विश्वास गर्छन् ।
अहिले वाणिज्य बैंकमा व्याजदर बृद्धि भइसकेको छ, त्यसले पहिले देखिनै वाणिज्य बैंक भन्दा बढी ब्याज दिँदै आएका विकास बैकलाई धक्का लाग्दैन ?
अहिले बाणिज्य बैंक र डेभलपमेन्ट बैकमा व्याजदरमा खासै भिन्नता छैन । दुई तिन महिना अगाडी फरक थियो तर अहिले छैन । हामी पनि साढे ६/ सात प्रतिशत व्याज दिइरहेका छा । बाणिज्य बैंकले पनि सँस्थागमा त्यस्तै दिइरहेको छ । सेभिङमा भने बाणिज्य बैंक भन्दा विकास बैंकले बढी दिन्छन् ।
कर्जाको हकमा पनि अहिले आएर बराबर हुन थालेको छ । सँस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले व्याजदर बढाए त्यसले गर्दा वाणिज्य बैंकमा बढेको हो । जस्तै नागरीक लगानी कोष ,आर्मी ,सञ्चय कोष जस्ताले बाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्छन् , विकास बैंकमा राख्दैनन् त्यसले गर्दा खासै ठुलो धक्का लाग्दैन ।
पूँजी वृद्धिसँगै विकास बैंकहरुले सुधार गर्नुपर्ने पाटा के हुन सक्छन् ?
पूँजीको साइज बृद्धि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा छ । ६०/६५ करोडमा चलेको विकास बैंकलाई साढे २ अर्ब पुर्याउनु आफैमा चूनौती छ । त्यही अनुसारको मेनपावरको क्षमता पनि हुनुपर्यो । आफैले गर्नु परेको भनेको मेनपावरको क्षमता अभिबृद्धि हो । पूँजी बढेपछि सेवामा पनि गुणस्तरता हुनुपर्छ ।
मर्जर राष्ट्रबैंकको संस्था बलियो बनाउने नीति हो कि अधिक संख्याका कारण अनुगमन गर्न मुस्किल परेर हो जस्तो लाग्छ ?
म त भन्छु मर्जर आवश्यकता नै हो । एक करोड ४० लाखको विकास बैंक पनि छ यस्तो अवस्थामा पूँजी बृद्धिको एकदमै आवाश्यकता देखिइसकेको थियो ।
कैलाश विकास बैंकको कुरा गर्ने हो भने १ अर्ब ५८ करोडको विकास बैंक हो । त्यस्तै १ करोड ४० लाखको. पनि विकास बैंक छन् । तर पनि राष्ट्र बैंकले मर्ज होउ त भनेको छैन नी । पुँजी बृद्धि जसरी पनि गर्नु मात्र भनेको हो । विदेशी लगानी ल्याएर हुन्छ या मर्ज गरेर हुन्छ । सँस्थालाई पुँजी पुर्याउन मर्जमा जानैपर्छ यसले संख्या घट्छ र राष्ट्रबैंकलाई सुपरभिजन गर्न पनि सहज हुन्छ ।
कैलाश विकास बैंकले चाहिँ कसरी आफ्नो पुँजी अबको एक बर्षभित्र पूर्याउँछ ?
कैलाश विकास बैंकको अहिले १ अर्ब ५८ करोड चुक्तापूँजी छ । २० प्रतिशत राइट शेयरको प्रक्रिया पनि करिब करिब अन्तिम चरणमा छ । बोनस शेयरबाट २ अर्ब ३० करोड हुन्छ । चालुबर्ष २० प्रतिशत नाफा कमाउने लक्ष्य छ । साथै मर्जर व्यवस्थापन ,हरेक बर्ष ३÷४ ओटा शाखा खोल्दै जाने हाम्रो बैंकको लक्ष्य हो । हाम्रो पूँजी सजिलै पुग्छ ।
तस्बिर : गगन अर्याल
नेपाल र चीनबिच १० बुँदे सम्झौता, विद्युतीय रेल काठमाडौं ल्याइने
एटिएम भित्र मुसो पसेर लाखौँ रूपैयाँ चटाचट पारेपछि